Axkaamta Ramadaanta Qore: Sh. Cabdirisaaq Cabdiraxmaan Xasan Rakuub Qaybtii 10aad
Wednesday May 15, 2019 - 08:51:26 in Articles by Hadhwanaag News
Soon aan salaad lahayn ma la aqbali karaa? Saxaabadi Rasuulku CSW barbaariyey dhaqankoodii wuxuu ahaa in ay qofka ku qiimeeyaan salaadda, qofka ka tagana aanay xayn-daabka Islaamnimo ku soo dari jirin.
Fahamo kala duwan oo laga soo saaray hab’adeegsiga xadiiskan ayaa culimo badani ku kala tageen, culimada qaar waxa ay soo guuriyeen hadalkii Taabicigii Suhri ee ahaa, "Gaalnimada laga hadlayaa maaha tii waynayd ee waa gaalnimo ka sokeysa gaalnimada weyn.”
Hadalkaa waxa ku tagay culimo badan oo hore iyo dambe ba lahaa. Hase ahaatee culimada ganafka ku dhufatay hadalkaa ayaa iyaguna leh, "Xadiiska in laga fahmo qofka salaadda ka tagaa in uu gaal yahay waa fahamkii Saxaabada, Taabiciintii waaweynayd, Imaam Suhri na waa Taabiciintii yaraa (oo wuxu ka mid ahaa taabiciinti dambe oo ma soo gaadhin Saxaabada waawaynayd badankooda) markaa fahamka lagu midaysan yahay aynnu ku tagno.”
Aayado badan baa ku soo degay qiimaha iyo abaalcelinta Alle SWT qofka ooga salaadda u leeyahahy. Ugu horrayn Alle SWT wuxu yidhi,"Salaaddu waxay u tahay Muminiinta wakhti go’an." Maaha jaanta rogan in aad ka dhigto xilligi aad doonta ba aad tukato, se waa wakhti la jaan goyey oogisteedu.
Rasuulka CSW oo bushaaro nololeed ku iftiminaya oogsiteedu na wuxu yidhi, "Salaadaha shanta ah iyo jimce ilaa jimce lagu gaadho, waxa ay tirtiraan dambiyada yaryar haddii aan lagu darin dambi weyn.” Xaqiiqdii iska daa in aad ajar ka heshide adigii baa lagu leeyahay dambi yadii kale ee kaa dhacayey na way masaxaysaa.
Sida oo kale Rasuulka CSW oo misaajidkiisi xagga dambe ka fadhiya ayaa nin soo tukaday salaamay, inta uu salaantii ka qaaday ayuu u raaciyey, "tuko maad tukane,” ninkii inta uu degdeg u noqday ayuu haddana soo tukaday Rasuulkuna CSW intii un buu ku celiyey. Mar saddexaadkii ayuu ku yidhi, "Rasuul Allow intaa in ka badan garan maaye maxaan sameeya.” Ninkaasina intaa aynnu kor ku soo sheegne Shuruud, Arkaan iyo Waajibyo ah un buu khaldayey. Markaa ansixidda salaaddada waxa kow ka ah in aad barato wixi salaaddadu ku ansax noqonaysay.